Ihowuliseyili isiseko sokwenza makeup isiko levegan yenza ilogo yakho yemveliso yelayibhile yabucala mveliso kunye nabathengisi | Ubuhle beIris
Umaleko wokupeyinta ulwelo matte
Matte lip intonga ileyibheli yabucala yenza umlomo intonga vend ...
I-lip liner ileyibheli yabucala inkohlakalo mahala isiko logo vel ...
Ulwelo yokuqaba kunye lip liner iseti siko lehoseyile l ...
Ihowuliseyili intonga intonga siko logo vegan velvet imilebe sti ...
Nude lip isilungiseleli sangasese labels siko unganxibanga lipg ...
Lipgloss kumthengisi isiko lip isilungiseleli seglosi yabucala diy c ...
OEM ubuso isiseko makeup ulwelo Ihowuliseyili p p ...
Ihowuliseyili eyeshadow palette vegan sombala priva ...
Ihowuliseyili isiseko sokwenza imveliso yesiko levegan yenza ilogo yakho yemveliso ileyibheli yabucala
Isiseko esinobunzima obunogqatso oluphezulu kunye nokugqitywa kwe-matte. Ukugquma okupheleleyo kukwasebenza ukulawula ukukhanya kunye nokubonisa umbala wakho imini yonke. Kodwa ayipheleli apho: esi siseko se-classic silungele isiqhelo, ioyile, indibaniselwano kunye neentlobo zolusu ezibuthathaka.
Ixabiso le-EXW: I-US $ 0.99 - 2.99 / isiQwengana
Min.Order Ubungakanani: 3000 Piece / Pieces
OEM. I-ODM: Iyafumaneka
Isiseko esingamanzi sinokuthamba okuthe tye kwaye okuthambileyo, ukwandiswa okuhle, kulula ukusityhala, ungagungqi, kwaye ubonelele ngokugubungela ngokupheleleyo. Inokugubungela ngokufanelekileyo iziphene zolusu ezinje ngamabala amabala, amabala amnyama ebusweni, izangqa ezimnyama phantsi kwamehlo, ukungalingani kwesikhumba kunye nezikroba ezandisiweyo. Yenza ibala likhanye ngakumbi kwaye libukeke ngakumbi, lenze ulusu lubonakale luyindalo ngokupheleleyo.
Isiseko esingamanzi sinomsebenzi wokuthambisa kunye nokutshixa amanzi. Iqulethe ubumhlophe kunye nokuthambisa kunye nokulungisa izithako ukukhusela ulusu, ukugubungela imigca emihle kunye nemibimbi, kwaye wenze ulusu lwakho lubonakale lufezeke ngakumbi.
Ifomula ehlala ixesha elide, engenamanzi, kunye nokubila ikuvumela ukuba ugcine ubuhle bexesha elide kulo lonke usuku. Ukunyamekelwa kwesiseko esingasindi kunokunyusa ukubengezela, kukhanye ithoni yesikhumba kwaye yenze ulusu lube mpuluswa. Uyilo olunokuthenjwa, ii-novices zingayisebenzisa ngokulula, zilungele abasetyhini abaneethoni zolusu ezahlukeneyo.
Igama lomxholo Isiseko
Ilungelo lethu 1. Inkohlakalo engenanto / Akukho Vavanyo lwezilwanyana
2. Vegan / Paraben simahla / ioyile yasimahla
3. Ukuhlala ixesha elide nokungangeni manzi
4. Ukuthamba, ukugubungela ngokupheleleyo
5. Kuzo zonke iintlobo zesikhumba
I-OEM / i-ODM Yamkelekile
MOQ Ii-PC ezili-1000
Ukupakisha Iifayile ezi-1 kwibhokisi yombala woyilo
Ukuhambisa ngenqanawe Ngomoya / ulwandle / Express
Intlawulo I-TT / i-Paypal / umanyano waseNtshona njl.
1.Q: Ngaba ungumenzi okanye inkampani yorhwebo?
A: singumenzi wobugcisa wokwenziwa.
2.Q: Mingaphi imibala onayo kwisiseko?
A: Imibala yeSiseko iyonke sinemibala engama-30 oyikhethileyo, kananjalo sinako ukwenza ngokwezifiso imibala yakho.
3Q: Ndingayifumana njani isampuli ukujonga umgangatho wakho?
A: okokuqala, masazise imfuneko sakho malunga izinto, ngoko siya kunika isindululo ngokufanelekileyo kwaye unike nekoteyishini. Nje ukuba zonke iinkcukacha ziqinisekise ukuba zingathumela iisampulu. Iindleko zesampulu ziya kubuyiselwa ukuba i-odolo ibekiwe.
4Q: Ngaba uyayamkela i-OEM I-ODM Kwaye ngaba ungenza uyilo kuthi?
A: Ewe, senza i-OEM ODM kwaye sinikezele ngeenkonzo zoyilo.
5Q: Ndingalindela ixesha elingakanani ukufumana isampuli?
A: Emva kokuba uhlawule intlawulo yesampula kwaye usithumele iifayile eziqinisekisiweyo, iisampulu ziya kuba zilungele ukuhanjiswa ngeentsuku ezi-3-7 zomsebenzi. Iisampulu ziya kuthunyelwa kuwe ngokudlulisa kwaye zifike ngeentsuku ezi-3-7. Ungasebenzisa iakhawunti yakho ecacileyo okanye usibhatalele kwangaphambili ukuba awunayo iakhawunti.
6Q: Kuthiwani ngexesha lokukhokelela kwimveliso yobuninzi?
A: Ukunyaniseka, kuxhomekeke kubungakanani be-odolo kunye nexesha obeka ngalo iodolo. Ngokwesiqhelo iya kuba ziintsuku ezingama-25 - 35. Singumzi-mveliso kwaye sinemveliso eyomeleleyo yokuhamba, sicebisa ukuba uqale ngokubuza iinyanga ezimbini phambi komhla ongathanda ukufumana iimveliso kwilizwe lakho.
7Q: Athini amagama akho okuhlawula?
A: Samkela i-T / T, i-Paypal, i-West Union.
8.Q: Uqhagamshelana njani nathi?
A: Singathanda ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo okanye ingxelo onayo!
Silapha ukukunceda-nceda uzive ukhululekile ukusithumela i-imeyile irisbecosmetics@gmail.com.
Egqithileyo Isiseko senkcubeko yeelebheli zabucala ezisisiseko sokugubungela abathengisi besiseko se vegan
Okulandelayo: Umgangatho ophezulu wolwelo olusisiseko sokugubungela isiseko selebheli yabucala enamanzi angamanzi angamanzi
ileyibheli yabucala yesiseko sabucala
yokwenza isiseko sendalo
ileyibheli yesiseko sabucala
Isiseko se vegan
Isiseko sevegan senza ilogo yakho
isiko lehoseyile isiko lokuzenzela
imbalasane yomthengisi wezinto zokuthambisa akukho logo ephezulu ...
I-vegan evelele yokuqaqanjelwa yeleyibhile yesiko h ...
Kwizinga eliphezulu ulwelo isiseko inshorensi ngokupheleleyo fo ...
Isiseko Custom ilebhile yabucala matte nesiseko ...
OEM ubuso isiseko makeup ulwelo cus lehoseyile ...
I-vegan eco makeup remover ioyile ehambisa amanzi abucala ...
Ukuba ufuna ukwazi iinkcukacha ezithe kratya, pls usithumelele ukubuza ngoku.
Hayi. 168, Lane 6495, Tingwei Road, Jinshan Industrial Zone, Shanghai